Izindatshana zikaJason Shuman Martech Zone |
Imibhalo nge UJason Shuman
UJason uyiChief of Staff eJulius, i-Influencer Marketing Platform. UJason ungusomabhizinisi kanye ne-VC onolwazi oluqonde ngqo kubathengi be-eCommerce, iziqalo ezinamacala amabili ezimakethe kanye ne-SaaS. UJason ukujabulela ukusebenzisana nabantu abafuna ukuxazulula izinkinga futhi banikeze izixazululo ezibalulekile.
NgoLwesine, Juni 15, 2017 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 UJason Shuman
Ukumaketha komthelela kuyindlela ekhula ngokushesha yokuthola online. Kunesizathu esihle — idatha yakamuva ifakazela i-ROI yemikhankaso yokuthengisa enomthelela: Amaphesenti ayisishiyagalombili nesibili wabathengi kungenzeka ukuthi alandele izincomo ezenziwe ngumgqugquzeli futhi yonke imali engu- $ 1 esetshenziselwe ukumaketha onethonya ibuyisa ama- $ 6.50 Yingakho ingqikithi yemali yokuthengisa enomthelela iyalinganiselwa ukwenyuka kusuka ku- $ 1 billion kuya ku- $ 5-10 billion eminyakeni emihlanu ezayo. Kepha, kuze kube manje, kuqhuba imikhankaso yokuthengisa enamandla